Xabsiyada Sucuudiga Oo Haweenkii Ku Jiray La Sii Wada Daayay Iyo Haweenay Khiyaamaysay Maamulka Suuriya Oo Saamaxaada Laga Reebay Kaligeed!(Hadhwanaagnews) Thursday, July 26, 2012 Riyaad, (Hadhwanaag/W/Wararka):-Maamulka Xabsiyada Dalka Sucuudiga ayaa Sheegay in dhamaan haweenkii ku jiray jeelasha dalkaa ay Ooda ka qaadeen oo la sii wada daayayRiyaad, (Hadhwanaag/W/Wararka):-Maamulka Xabsiyada Dalka Sucuudiga ayaa Sheegay in dhamaan haweenkii ku jiray jeelasha dalkaa ay Ooda ka qaadeen oo la sii wada daayay, hasa yeeshee gabadh qudha lagu reebay, taas oo sababo gaar ah xaaladeedu tahay.
Colonel Maansuur Al Turki oo ah afhayeenka maamulka xabsiyada dalka Boqortooyada Sucuudi Arabiya oo maanta saxaafada la hadlay, ayaa sheegay in dhamaan haweenkii ku jiray, xabsiyada Ammaanka ee dalka Sucuudiga la sii wada daayay, marka laga reebo, haweenay ay kala tageen milyaneer Sucuudi ah oo khiyaamaysay Maamulka dalka Suuriya, taas oo xaaladeedu gaar tahay.
Afhayeenkan ayaa sheegay in sadexdii gabdhood ee ugu danbeeyay todobaadkii hore laga sii daayay xabsiyada dalkaas, laakiin xaalada gabadhaasi tahay mid gaar ah oo
si ka duwan haweenka kale loo baadhayo.
Haweenaydan laga reebay maxaabiista ku jirtay jeelasha Sucuudiga ayaa la sheegay in ay khiyaamaysay, maamulka Dalka Suuriya ee uu madaxda ka yahay Madaxweyne Bashaar Al Asad, taas oo sida warbaahintu sheegtay lacago iyo Sanduuq xisaabeedyo ay madaxda dawladu ku leedahay dalka Faransiiska khiyaamaysay.
Sucuudigu may sheegin goorta gabadhan la siidayn doono, hasa yeeshee hayadaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa soo dhaweeyay, dumar uur lahaa iyo kuwo xanuunsanayay oo laga sii daayay jeelasha haweenka ee Sucuudiga. Faysal Maxamed XasanHadhwanaag/office Hargeisa Somaliland f.maxamed03@hotmail.com